कसरी स्पाम ईमेलको साथ डील गर्ने: Semalt बाट अभ्यास गर्नुहोस्
प्रत्येक इन्टरनेट उपयोगकर्ता को लागी असंख्य स्पाम सन्देशहरु का प्रत्येक पल्ट सामना गर्नु पर्छ। इन्टर्नेट स्प्यामरले भरिएको छ जसले व्यक्तिगत जानकारीको प्रत्येक माध्यमबाट पहुँच गर्न र पहुँच गर्न कोशिस गर्दछ। स्प्याम ईमेलहरू विभिन्न तरिकाहरूमा आउँदछन्, परम्परागत रूपमा प्रयोगकर्तालाई विशेष लिंकमा क्लिक गर्न वा अर्को कल-टु-एक्शन एक्जिक्युसन प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ। धेरै स्पामर्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दछ जसले छिटो फिशिंगको शिकार गर्न सक्दछ वा अन्य घोटालाहरूका लागि पतन हुन्छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, रस बार्बरले स्पाम ईमेल रोक्न निम्न ways तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
१. फरक ईमेल ठेगाना सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं अनलाइन अनलाइन तरीकामा प्रयोगको लागि अस्थायी ईमेल ठेगाना सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। स्प्यामरका सब भन्दा ठूला दृष्टिकोणहरू मध्ये एक ईमेल सूचीको स .्ग्रह हो। जंक ईमेल खाताहरूले स्प्यामरहरू कब्जा गर्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई हानि पुर्‍याउनु अघि स्पामको रूपमा मार्क गर्न सक्दछन्। यो प्रयोगकर्ताको लागि फाइदाजनक पनि छ, विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई व्यक्तिगत ईमेल ठेगाना नदिई, जुन अन्य स्रोतहरूको भन्दा विश्वासयोग्य नहुन सक्छ। नक्कली ईमेल ठेगानाहरूले धेरै तरिकाहरू मार्फत स्पाम नमूनाहरू क्याप्चर गर्न सक्दछ।
२. एक सुरक्षित ईमेल प्रदायक प्रयोग गर्नुहोस्
अधिकांश स्प्यामरहरू प्रणालीको कमजोरीका कारण फस्टाउँछन्। नतिजाको रूपमा, यो सँधै सुरक्षित ईमेल सर्भरमा निर्भर हुनु महत्त्वपूर्ण छ, जसमा स्प्याम फिल्टरहरू छन्। केहि उपकरणहरू जस्तै अनस्पाइबल, काउन्टरमेल, र शेजलले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूका लागि सुरक्षित वीपीएन लगइनहरू प्रदान गर्दछ, स्प्यामरले तपाईंको ईमेलहरू पहुँच गर्ने सम्भावना हटाउँदै। अन्य केसहरूमा, केहि ईमेल प्रदायकहरूसँग ईमेलमा भएका संलग्नकहरूमा कीरा, ट्रोजन र मालवेयर पत्ता लगाउने संयन्त्र हुन्छन्। उदाहरण को लागी, गुगल मेल तपाईं असंख्य स्पाम आक्रमणबाट बचाउन सक्छ।
Ry. ईनक्रिप्ट व्यक्तिगत ईमेल ठेगाना
स्प्यामरलाई ईमेल ठेगानामा पुग्न गाह्रो हुन सक्छ जुन ईन्क्रिप्शन छ। उदाहरण को लागी, धेरै तह संरक्षण जस्तै २-عنصر प्रमाणीकरण ह्याकि process प्रक्रिया गाह्रो प्रस्तुत गर्न सक्छ, प्रयोगकर्ता धेरै मुद्दाहरु बचत। उदाहरण को लागी, म्याक प्रयोगकर्ताहरु GPGTools आफ्नो मेल बक्सहरु ईन्क्रिप्ट गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्दछ। GPG4Win अर्को महत्वपूर्ण ईन्क्रिप्शन कुञ्जी हो, जसले आउटलुक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ। अन्य उपकरणहरूमा ईन्क्रिप्शन प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन् जस्तै ईन्मेलमेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि थन्डरबर्ड।
Spam. स्पाम फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै जसो केसहरूमा स्प्याम फिल्टरहरूले विशेष ईमेल ठेगानामा सुविधाहरू डिफल्ट गरिरहन्छन्। तिनीहरू प्रायः व्यक्तिहरूलाई स्प्याम ईमेलहरू हटाउन सक्ने सम्भावित आनन्द लिन मद्दत गर्दछ शारीरिक प्रयास रोजगार बिना। यो गर्ने एक सुरक्षित तरिका भनेको विशिष्ट ईमेलहरूमा स्वचालित स्वचालित गर्न यो विशेष फोल्डरहरूमा जानको लागि हो। नतिजाको रूपमा, तपाइँ तपाइँको स्पाम ईमेलहरू टाढा साथै सम्पूर्ण बनाउँदछ। यस विधिले केहि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तै बिलहरू, काम, स्कूल र तपाईंको ईमेल खातामा समावेश अन्य कार्यहरू व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
सन्देश र ईमेल समावेश प्रत्येक अनलाइन प्रयास स्पाम का विषय हुन सक्दछ। स्पामर्सले विशाल स्रोतहरू हटाउनेका साथसाथै व्यक्तिगत डाटामा उनीहरूको स्कूपमा अयोग्य ईच्छा गर्ने कार्यहरू गर्दछन्। त्यहाँ स्प्याम ईमेलहरूसँग डिल गर्न सक्ने उपायहरू छन्। यो डिजिटल युगमा, स्प्यामरसँग एसईओ जस्तै उनीहरूको केहि कार्यहरू संचालन गर्न स्वचालित उपकरणहरू छन्। केहि स्प्याम निर्देशनहरूलाई वेवास्ता गर्दा तपाईलाई धेरै समस्या हुन सक्छ जुन उनीहरूले निम्त्याउन सक्छ। यो गाइडले एन्टी-स्प्याम संयन्त्रहरू कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई र तपाईंको व्यवसायलाई स्पाम ईमेलबाट टाढा राख्न मद्दत गर्दछ।